नेपाल आज | दशैंमा घुम्ने सोंच राख्नु भएको छ ? यी ठाउँ विकल्प हुन सक्छन्
दशैंमा घुम्ने सोंच राख्नु भएको छ ? यी ठाउँ विकल्प हुन सक्छन्
यसपालि दसैंको लामो बिदामा परिवार एवं साथीभाइसँग घुम्न कहाँ जाने ? भन्ने लागेको छ भने हामीले केही उपयुक्त गन्तव्यका बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौं । अहिले विदेशीलाई मात्र नभएर स्वदेशी एवं अन्तरिक पर्यटकका लागि नेपालमा घुमफिर गरेर रमाइलो गर्नका लागि यहाँ प्रशस्त घुम्न लायक ठाउँ छन् । अहिले हामीले जानकारी गराएका गन्तव्यस्थल मध्ये तपाइँहरू आफूलाई कुन मनपर्छ सोही रोजेर आन्तरिक पर्यटकीय भ्रमण एवं घुमफिरमा निस्कन सक्नुहुनेछ । पछिल्लो समय नेपालीहरू दसैं, तिहार र छर्ठ पर्वलगायतको लामो बिदामा परिवार एवं साथीसँगीसित घुम्न जान थालेपछि धेरै गन्तव्यस्थलहरू आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित तयार भएका छन् । दसैंलगायत अन्य बिदाका बेला राम्रो आम्दानी हुनेहरू विदेश आउटबोन पर्यटकीय भ्रमणमा टुर प्याकेज नै खरिद गरी घुम्न जान्छन् । कम आम्दानी गर्नेहरू एवं सानो बजेटमा घुमफिर गर्न चाहनेको रोजाइचाहिँ नेपालकै विभिन्न ठाउँ नै घुम्ने हुने गरेका छन् ।
काठमाडौंबाट नजिकै रहेको नगरकोट प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । नगरकोटबाट राम्रा राम्रा दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । यहाँ परिवारसँग गएर समय बिताउन मज्जा हुन्छ । बस्नका लागि सस्तादेखि महँगा सबैखाले होटल यहाँ रहेका छन् । नगरकोटबाट काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । नगरकोटको डाँडोमा रहेको भ्यु टावरबाट नजिकै हिमालहरू मुस्कुराएको देख्न पाइन्छ । सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्नका लागि पनि नगरकोट प्रख्यात रहेको छ ।
काठमाडौंबाट नजिकै रहेको भक्तपुरको नगरकोट पनि छोटो बिदाका लागि घुम्न जाने उत्कृष्ट गन्तव्य हो । यहाँ सानादेखि स्तरीय होटलहरू भएको हुँदा खान बस्नका लागि कुनै समस्या हुँदैन । यहाँबाट सेता हिमाल र प्राकृतिक दृश्यहरू अवलोकन गर्न पाइन्छ । सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको भीड लाग्ने गर्छ ।
काठमाडौंबाट जम्मा २५ किमी छोटो सडक मार्गको यात्रामै सजिलै पुग्न सकिने गन्तव्य हो, नुवाकोटको ककनी । यसलाई प्रकृतिको क्रीडास्थल नै भन्न सकिन्छ । यहाँबाट पश्चिममा लमजुङ र मनास्लु हिमाल, उत्तरमा गणेश र लाङटाङ तथा पूर्वमा गौरीशंकर हिमाल नाङ्गो आँखाले स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । यसैगरि, मनोरम हिमाली भेगदेखि समतल नदीका फाँटसम्म अवलोकन गर्न सक्नु पर्यटकीय दृष्ट्रिले ककनी थप आकर्षणको केन्द्र हो । अहिले यहाँ कृत्रिम बगैंचादेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो मानव पाइला राख्न सफल एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङनोर्गे शेर्पालगायत विभिन्न आरोहीहरूको सम्झनामा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले निर्माण गरेको स्मारकहरूलाई निकै लोभ लाग्नेगरी सजाएर राखिएको छ । त्यहाँ पुगेपछि नेपालको हिमाल आरोहणको सम्पूर्ण इतिहासका बारेमा सजिलै जानकारी पाउन सकिनेछ । यसैगरी, नुवाकोटको ऐतिहासिक सात तले दरबार, त्रिशूली र देवीघाट विद्युत् गृहको अवलोकन पछि त्रिशूलीमा एक रात बसेर पुनः ट्राउट हाइवेको माछा खाँदै पर्यटकीय गन्तव्यस्थल ककनीबाटै फर्किन सकिन्छ ।
मकवानपुरको दामन पनि पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ । राजधानीबाट नजिक रहेको दामनमा राम्रा राम्रा होटल तथा रिसोर्टसमेत खुलेका छन् । कुलेखानी हुँदै पुगिने दामन प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि परिचित रहेको छ । अग्लो स्थानमा रहेको दामनबाट सुन्दर हिमाल, वनजंगल, स्थानीय संस्कृतिको अवलोकन गर्न पाइन्छ ।
नेपालको स्वीट्जरल्यान्ड भनेर चिनिन्छ, दोलखाको जिरीलाई । राजधानी उपत्यकाबाट नजिकैको अग्लो उचाइमा रहेको जिरीमा दसैं बिदा मनाउन काठमाडौंदेखि ठूलो संख्यामा युवायुवती तथा परिवारपुग्ने गर्छन् । काठमाडौंबाट काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट हुँदै जिरी पुग्न सकिन्छ । यहाँ आफ्नो निजी सवारीबाट पनि सजिलै पुग्न सकिन्छ । राजधानीबाट करिब दुई सय किलोमिटर टाढा रहेको जिरी पुगेपछि बेग्लै अनुभूति हुन्छ । जिरी बजार कुनै समयमा सगरमाथाको प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित थियो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जानका लागि जिरी बजार भएर मात्र जानुपर्दथ्यो । तर, अहिले सोलुखुम्बुको नाम्चे, लुक्ला र स्याङ्बोचेमा विमानस्थल बनेपछि केही मात्रामा जिरी बजार सुस्ताएको छ । सगरमाथा जानका लागि पैदलयात्री भने अझै पनि यही बाटो भएर आवतजावत गर्छन् । यो क्षेत्र विशेष गरी, चिया, लोक्तालगाएत हिमाली जडीबुटीका रूपले पनि निकै प्रख्यात छ ।
नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो, चितवनको सौराहा । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सौराहा वाइल्ड लाइफ पर्यटनमा विश्वमै चर्चित रहेको छ । यहाँ बर्सेनि लाखौं स्वदेशी विदेशी पर्यटक पुग्ने गर्छन् । यहाँको प्रमुख आकर्षण भनेको हात्तीमा जंगल सफारी गर्नु हो । हात्ती तथा जिप सफारी गर्दै बाघ, गैंडा, घडीयाल अवलोकन गर्न पाइन्छ । राप्ती नदीमा बोटिङ गर्दा गोही, गैंडालगायतका जनावर देखिन्छन् । यसका अलावा यहाँ थारू कल्चरसमेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । नारायणगढबाट नजिकै रहेको सौराहामा अहिले हात्ती महोत्सव भइरहेको छ । यहाँ भ्रमणमा जाँदा महोत्सवको आनन्द लिन सकिनेछ । सौरहामा करिब ५ हजार रुपैयाँमा २ रात तीन दिन सौराहा घुम्न पाइने छ । दसैं र नयाँ वर्षमा आन्तरिक पर्यटकीय भ्रमणका लागि सौराहा उत्तम गन्तव्य हुन सक्छ । यहाँ सामान्य होटलदेखि स्तरीय होटलसम्म सञ्चालनमा रहेका छन् । वाइल्ड लाइफ तथा थारू संस्कृति हेर्न रुचि राख्नका लागि चितवनको सौराहा निकै उपयुक्त हुन्छ । सौराहामा जंगल सफारी, हात्ती सफारी, चरा वाचिङ तथा थारू संस्कृतिका लागि प्रख्यात रहेको छ । एक रात दुई दिन वा दुई रात तीन दिनको समय उपयुक्त हुन्छ, यहाँ । सौराहा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने मात्र नभएर अहिले स्वदेशी पर्यटकको पनि रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखरा घुमफिरका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो । दसैं बिदाका समयमा पोखरा भ्रमणमा जाने नेपालीहरू प्रशस्त हुने गर्छन् । नयाँ वर्ष, दसैं तथा अन्य बिदाको समयमा यहाँका होटलहरू भरिभराउ हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पोखराको पहिलो आकर्षण भनेको फेवाताल हो । जहाँ डुंगामा सयर गर्दै सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । माछापुच्छ्रे हिमाल पनि यहीँबाट देखिन्छ । पोखराको जुनसुुकै ठाउँबाट उत्तरतर्फ सेता हिमालहरू देख्न सकिन्छ । पोखरामा घुमफिरका लागि डेभिड फल्स, गुप्तेश्वर गुफा, महेन्द्र गुफा, चमेरी गुफा, बेगनाश ताल लगायतका मनमोहक ठाउँहरू रहेका छन् । सराङकोट यहाँको अर्को आकर्षण हो । सराङकोटबाट पोखरा सहर, फेवाताल, सेता हिमाललगायतको दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । पछिल्लो समय पोखरा साहसिक खेलको गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ । सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ र जिप फलायर गर्नुको मज्जा बेग्लै रहेको छ । त्यस्तै, अल्ट्रालाइट उडान पनि पोखरामा गर्न पाइन्छ । पछिल्लो समय पोखरामा बन्जीसमेत सञ्चालनमा आएको छ । यस क्षेत्रमा पुगेपछि आँखैअगाडि हिमाल हेर्न मात्र नभएर तालमा बोटिङ गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभएर यहाँ गुफा हेर्न चाहनेले गुफा तथा साहसिक खेल रुचाउनेले प्याराग्लाइडिङ, अल्टा, बन्जी, जिप फलाएर जस्ता साहसिक खेलहरूको आनन्द लिन सक्छन् । यसैगरी, धार्मिक रुच राख्नेहरूका लागि विभिन्न धार्मिक महŒवका मन्दिर विन्ध्यबासिनी, बाराही मन्दिर आकर्षक हुन सक्छ । यो क्षेत्रमा बिदा मनाउन चाहनेहरूले एक रातदेखि ३ रातसम्म बिताउन सक्छन् ।
भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी अर्को आकर्षक गन्तव्य हो । घुमफिर गर्नका लागि लुम्बिनी उत्तम गन्तव्य हुन सक्छ । भैरहवाबाट नजिकै रहेको लुम्बिनी विश्वभर चर्चित रहेको छ । पछिल्लो समय विदेशी मात्र होइन नेपालीहरूको पनि लुम्बिनीमा बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ । यहाँको प्रमुख आकर्षण भनेको मायादेवी मन्दिर हो । अत्यन्तै सुन्दर रहेको लुम्बिनीमा विभिन्न देशका कलात्मक गुम्बाहरू रहेका छन् । सबैभन्दा राम्रो गुम्बा बनाउन विभिन्न देशबीच प्रतिस्पर्धा भएको आभाष मिल्छ ।
तनहुँको बन्दीपुर पुरानो बजार हो । पुराना घरहरूलाई कलात्मक रूपमा सिंगारिएको बन्दीपुर मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एकमा पर्न सफल भएको छ । डुम्रेबाट ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बन्दीपुरमा स्वदेशी तथा विदेशीको बाक्लो भीड लाग्ने गर्छ । यहाँको आकर्षण भनेको नेवारी बस्ती र सुन्दर दृश्यावलोकन नै हो । यहाँबाट तनहुँको सुन्दर फाँटहरू, हिमाललगायतका दृश्यहरू हेर्न पाइन्छ । वातावरणका हिसाबले पनि यो ठाउँ उत्तम छ । नयाँ वर्षमा बन्दीपुर गएर परिवार तथा साथीभाइसँग मज्जाले रात बिताउन सकिन्छ ।
लमजुङको घलेगाउँ ग्रामीण पर्यटनका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो । होमस्टेमार्फत सेवा दिने घलेगाउँमा आतिथ्य सत्कार लोभलाग्दो छ । घलेगाउँ एकपटक पुग्नैपर्ने ठाउँ हो । यातायातको सुविधा पुगिसकेको घलेगाउँमा खान बस्नका लागि सुविधा छ । घलेहरूको बस्ती रहेको घलेगाउँमा छोटो बिदामा पनि भ्रमणका लागि उत्तम गन्तव्य मानिन्छ । एकपटक घलेगाउँ पुगेको मानिस त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, त्यहाँको बस्ती, त्यहाँका मानिसको आतिथ्य सत्कारका कारण जिन्दगीभर भुल्न सक्दैन ।
अन्य गन्तव्यको तुलनामा अलि टाढा र महँगो गन्तव्य भए पनि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा रहेको मुक्तिनाथ भ्रमणका लागि उत्कृष्ट रहेको छ । यहाँ काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै जहाज र गाडीमा पुग्न सकिन्छ । यहाँ भ्रमणका लागि अलि लामो समय मिलाउनुपर्छ । मुक्तिनाथ मन्दिर विश्वभर चर्चित छ । बर्सेनि लाखौं हिन्दू र बौद्धधर्मालम्बीहरू यहाँ पुग्ने गर्छन् । यहाँको प्राकृतिक दृश्यहरूले आकर्षित नहुने सायदै कम होलान् । तेस्रो विश्वका रूपमा हेरिने सुन्दर भ्याली लोमान्थाङ पनि मुस्ताङमै पर्छ ।
बर्दिया वाइल्डलाइफ पर्यटनका लागि चर्चित रहेको छ । पछिल्लो समय बर्दिया राष्टिय निकुञ्जको भ्रमणका लागि थुप्रै स्वदेशी, विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । यहाँ विश्वमै लोप हुन लागेको पाटे बाघ पाइन्छ । बिदामा घुम्न जानका लागि बर्दिया उत्कष्ट गन्तव्य हुन सक्छ ।
विश्वमा घुम्न जानलाई आग्रह गर्ने संस्था लोन्ली पलानेटले विश्को उत्कृष्ट दसमध्ये परेको स्थान हो लोमाङथाङ । नेपालमा राजतन्त्र समाप्ती भए तापनि यो क्षेत्रमा राजा र राजपरिवारलाई गरिने सम्मान तथा मर्यादा अहिलेसम्म जारी छ । यो क्षेत्रमा हुने ठूलो पर्व तिजी र यातुङमा राजपरिवारको उपस्थितिमा मात्र हुने गर्छ । यति मात्र नभएर यहाँ भएका गुफा तथा प्राकृतिक सौन्दर्यनै यहाँको प्रमुख आकर्षण हो । हिन्दू तथा बौद्ध दुबै धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ भएर जानुपर्ने हुन्छ लोमाङथाङ । यहाँका लागि १० दिनको समय उपुयुक्त हुन्छ ।
धार्मिक हिसाबले निकै प्रख्यात रहेको पाथिभरा देवी मन्दिर ताप्लेजुङमा पर्छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको यो मन्दिरबाट विश्वको तेस्रो अग्लो तथा नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल हेर्न सहजै सकिन्छ । पाथीभरा मन्दिर परिसरमा बास बस्नका लागि उपयुक्त स्थल नभएका कारण फेदीमा बास बस्नुपर्ने हुन्छ । फेदीबाट ३ घण्टाको पैदल यात्रापश्चात पुग्न सकिन्छ, पाथीभरा मन्दिर परिसर । यहाँका लागि ६ दिनको समय उपयुक्त हुने गर्छ ।
कन्याम र सन्दकपुर
इलाम भ्रमणका क्रममा कन्याम र सन्दकपुरको फन्को लगाउन सकिन्छ । थुम्का (थुम्कामा लगाइएको चिया बगान र नागबेली सडकले पनि प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम झझल्को दिन्छ । सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि नेपालमै प्रख्यात श्रीअन्तुदेखि जैविक विविधताले सम्पन्न माईपोखरी र सन्दकपुरसम्मको यात्राले इलाम भ्रमणलाई सार्थक बनाउँछ ।
जोमसोममा हावा सरर
घुमघामका सौखिनहरूले एकपटक पुग्नैपर्ने गन्तव्य हो (जोमसोम । मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम जोमसोममा हिमाली जनजीवनसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न सकिन्छ । यहाँको अनौठो भू (बनोटले आगन्तुकहरूको मन पगाल्छ । पर्यटनमै आधारित जोमसोमबाट धौलागिरि तथा नीलगिरि हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ । जोमसोम प्रख्यात तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र लोमान्थाङ जाने प्रवेशद्वार पनि हो ।
से–फोक्सुन्डो ताललाई गन्तव्य बनाएर डोल्पाको यात्रा गर्न सकिन्छ । जीवविहीन यो ताललाई हरियो र नीलो रंगको अनुपम मिश्रणले रंगाएको छ । आकाशमा सूर्यको स्थानसँगै रंग फेर्ने फोक्सुन्डोको कञ्चन पानीलाई नांगा हिमालहरूले पहरा दिएका छन् । एउटा प्रचलित किंवदन्तीअनुसार यो तालभित्र प्राचीन गाउँको अवशेष देखिन्छ । से फोक्सुन्डो नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो । से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो ताल र से गुम्बा छ । उपल्लो डोल्पामा पर्ने से गुम्बा विश्वका प्रमुख १२ बौद्ध गुम्बामध्ये एक मानिन्छ ।